သင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူ Martech Zone
Old- ကျောင်း Switchboard အော်ပရေတာ
ဖုန်းခေါ်ချိန်တစ်လျှောက်လုံးသူမကငါလိုချင်တာကိုစာရင်းပြုစုခဲ့တယ်၊ သူမကဒီလိုမျိုးပြောခဲ့တယ် - ငါ့ဖောက်သည်များ ကြိုက်တယ် "နှင့်" ငါ့ကိုရဖို့မန်နေဂျာစကားပြောပါစေ us ပိုကောင်းတဲ့သဘောတူညီမှု” နှင့်“ မင်းရဲ့စိတ်ပျက်မှုကိုငါနားလည်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာငါမသိဘူး သူတို့ လုပ်ပါ” လို့ပြောတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ဒါဟာမထင်ရှားနိုင်ပေမယ့်သူကငါ့ဘက်မှာရှိနေသလိုပြောနေတာပါ။ ငါအတွင်းလူ၌ (wo) တစ်ယောက်၊ မှဲ့၊ မိတ်ဆွေဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုဌာနသို့ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်သော်ကျွန်ုပ်၏ caper ကိုပြီးမြောက်ရန်ကျွန်ုပ်၏စောင့်ဆိုင်းမှုကိုခံစားနေရသည်။
ရိုးရိုးလေး, သူမကငါ့ကိုမှာရှိခဲ့ပါတယ် us.
မကြာခဏဆိုသလိုဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်ရန်ဘက်များဖြစ်ပြီးအပျက်သဘောဆောင်သောရလဒ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဒီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကကျွန်မရဲ့အခြေအနေကိုတကယ်ဂရုစိုက်ပုံရတယ်။ သူမကကျွန်တော့်ကိုတစ်ခုခုအတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီးအောင်မြင်ချင်ခဲ့တယ်။ ဒါကသေးငယ်တဲ့ငွေပေးငွေယူဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဂြိုဟ်တုဝန်ဆောင်မှုမှအဆင့်မြင့်ဒီဂျစ်တယ်တီဗီသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏ရွေးချယ်မှုများကိုရှင်းပြရာတွင်ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည့်စကားကိုနားထောင်ရာတွင်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖုန်းဆက်စဉ်သူမသည်ကျွန်ုပ်လိုချင်သောအရာကိုနားမထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သူပြောခဲ့သည့်အတိုင်းသူမလေးစားခြင်းကိုငါမကြောက်ခဲ့ပါ။
ဤနေရာတွင်ပထမသင်ခန်းစာမှာဖောက်သည်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်၏ဖောက်သည်များအားနားထောင်ခြင်းနှင့်ပြmutနာတစ်ခုအတွက် (နှစ် ဦး နှစ်ဖက်) အကျိုးရှိသောအဖြေရှာရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကိုယ်စားလှယ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကိုကျေးဇူး၊ ဉာဏ်ရည်၊ နာရီဝက်အောက်၌ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးသာဤကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည် Dish Network (whoops!) မှ AT&T (double whoops !?) သို့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပိုကြီးတဲ့သင်ခန်းစာကတော့ငါ့အတွေ့အကြုံပဲ အသုံးပြုသူကို အတွေ့အကြုံ - ဤဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ကျွန်ုပ်၏ယေဘူယျအမြင်ကိုတိုးတက်စေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်နှင့်ထိတွေ့မှုမရှိသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်၏သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံမှာအပြုသဘောဆောင်ပြီးဖြစ်သည်။ သင်၏ထုတ်ကုန်သည်မည်မျှကောင်းသည်ကိုအရေးမကြီးပါ။ - အကယ်၍ ထိုကုန်ပစ္စည်းသို့ရောက်သောအတွေ့အကြုံသည်မကောင်းပါကလူတွေကပင်ကြိုးစားရန်မကြိုးစားလိုကြပါ။
ဒီဇင်ဘာ 21, 2009 မှာ 9: 41 AM
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနေခြင်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။